ဆွဲပြားလေး နှစ်ခု နှင့် ကံကြမ္မာကြောင့်လား ယုံကြည်မှုကြောင့်လား အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့တဲ့သူ – White Sone
လမ်းချော်ပြီး လမ်းဘေးက သစ်ပင် ဝင်တိုက်မိကာ ရစရာမရှိအောင်ပြားချပ်သွားတဲ့ ကားထဲမှာ ယာဉ်မောင်းသူဟာ အနည်းငယ် ထိခိုက်ပွန်းရှယုံလေးသာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့..
ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီခရိုင် ဘန့်ဘွန့်မြို့နယ် နောင်အိလွန်းကျေးရွာအုပ်စုအနီးက အမှတ် ၃၄၄ အဝေးပြေးလမ်းမ ကီလိုမီတာတိုင် ၂၅ မှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ၁၈:၀၀ ချိန် မိုးရွားသွန်းထားခြင်းကြောင့် Toyota Vigo အနက်ရောင် ယာဉ်အမှတ် ၆၇၄ ဟာလမ်းချော်ပြီး သစ်ပင်ကိုဝင်ဆောင့်မိပြီး ကားမှာ ပြားချပ်ကာ သစ်ပင်ကညှပ်ထားသလို ရစရာမရှိအောင် အခြေအနေက အတော်ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် ယာဉ်မောင်း ‘နိုင်အထိတယား’ ဆိုသူမှာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ဘာထိခိုက်ဒဏ်ရာမှမရရှိဘဲ အသေးအမွှားပွန်းရှယုံဘဲ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ရဲစစ်ချက်အရ သူဟာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူထံမှ ပြန်လာခဲ့စဉ် မိုးရွားသွန်းနေလို့ သတိထားမောင်းနှင်ခဲ့စဉ် ရုတ်တရက် လမ်းချော်ကာ လမ်းဘေးက ပထမ သစ်ပင်ကို ဝင်ဆောင့်မိခဲ့တယ် ၊ သစ်ပင်ဟာကျိုးပြီးနောက်ထပ် ဒုတိယသစ်ပင်ကို ထပ်မံဆောင့်မိပြန်တယ် ။
ကားကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပါဘဲ ၊ ကျွန်တော်ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ကားထဲက ရအောင်ထွက်လာပြီး သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းခဲ့ပါတယ် ။ “ ကျွန်တော်ဘာ့ကြောင့်သေဘေးက လွတ်ခဲ့သလဲမေးရင်တော့ ကျွန်တော့လည်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ “ လုံဖော့ခွန်း “ ဆရာတော်ပုံတော်ကြေးပြားလေးနဲ့ ကားထဲမှာချိတ်ထားတဲ့ “ လူံပူထွက် “ဆရာတော်တို့ရဲ့တန်ခိုးတော်ကြောင့်ဘဲ “ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့က ကျွန်တော့ကိုကြည့်ပြီး လုံးဝမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ထူးခြားအံ့ဩစရာလို့ဆိုရမလား ? သေနေ့မစေ့လို့လား ? သံဃာကိုကြည်ညိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်လား ? ဆိုတာတော့ မဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူး ဗျာ။ မိုးရွာနေတဲ့အချိန် မည်သူမဆိုကားမောင်းကြရင် အထူးသတိထားတတ်ကြဘို့လိုပါတယ် ၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လူတိုင်းကျွန်တော့်လို အမြဲကံမကောင်းနိုင်ကြပါဘူး။ လို့ဆိုပါတယ်။
တကယ်လည်း ထိုသူသည် ကံကောင်းလွန်းလှပါသည် ၊ ဒီအနေအထားမျိုးကတော့ ဘယ်လိုမှ သေဘေးကနေလွတ်လာဘို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ..
ခုတော့ ထိခိုက်ဖူးရောင်တဲ့ ဒဏ်ရာလေးတွေကို “ ကျားပရုပ်ဆီ လေးလူးလိုက်ယုံနဲ့ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုးမို့ ကံကောင်းလှပါသည် ဗျာ..
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အကောင်းဆုံး နိုင်ငံမှာ လူနာကုတင်တွေ မလုံလောက်တော့
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး တောင်ပံဝတ်စုံကို BMW က စမ်းသပ်ပြသမှု အောင်မြင်
အမေရိကန် ပင်တဂွန်ဌာနချုပ်က ရရှိထားတဲ့ ပန်းကန်ပြားပျံ...
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးကို ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးမှူး ကိုယ်တိုင်...
(၆) နှစ်သားကတည်းက နှာခေါင်းထဲဝင်ခဲ့တဲ့ အကြွေစေ့ကို...
စင်ကာပူမှာ တိရိစ္ဆာန်ဆဲလ်ကနေ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ...
တရုတ်ပြည်မှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေကို...